Al-shabaab oo laga qabsaday Saldhig milatari oo ay ku lahaayeen duleedka degmada Beled-Xaawo. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Al-shabaab oo laga qabsaday Saldhig milatari oo ay ku lahaayeen duleedka degmada...
Al-shabaab oo laga qabsaday Saldhig milatari oo ay ku lahaayeen duleedka degmada Beled-Xaawo.
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda Soomaaliya ee Jooga Gedo inay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ku yaalla duleedka degmada Beled-Xaawo.
Wararka ayaa sheegaya in xaruntaas shabaab gabi ahaanba lagala Wareegay, waxayna sheegeen Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Gedo ay weerar ku qaadeen degaanka Qaniyaale oo 30km u jira degmada Beled-Xaawo, isla markaana ay kala wareegeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Gedo ugu Magacaaban dowladda Soomaaliya Cisman Nuur Xaaji Macalimow ayaa sheegay in weerarkasi ay Ciidamada ku dileen laba Xubnood, sidoo kale ay dib uga soo celiyeen 300 oo Neef oo Ari ah, kuwaas oo uu sheegay inay dadka Shacabka ah Al-Shabaab markii hore si awood ah uga qaateen.
Previous articleShirkii wadatashiga madaxda DF & dowlad Goboleedyada oo maanta lagu wado in uu furmo..
Next articleXukumadda Giriiga oo ku dhawaaqday in ay hub dheeraad ah soo iibsanayso xilli xiisadda kala dhaxeeysa Turkiga..
The United States says a bomb blast has killed an al-Shabab...